Забур 101 CARS - Nnwom 101 ASCB
1Mɛto wo dɔ ne wo tenenee ho dwom;
Ao Awurade, mɛto ayɛyie dwom ama wo.
2Mɛhwɛ yie abu ɔbra a ɛho teɛ.
Dabɛn na wobɛba me nkyɛn?
Mede akoma a afɔdie nni mu
bɛnante me fie.
3Meremfa mʼani nsi
adeɛ a ɛyɛ tane biara so.
Mekyiri nnipa a wɔnni gyidie;
Me ne wɔn nni hwee yɛ.
4Nnipa a wɔn akoma yɛ kontonkyi remmɛn me;
5Obiara a ɔdi ne yɔnko ho nsekuro wɔ kɔkoam no,
deɛ ɔwɔ ahantan ani ne ahomasoɔ akoma,
ɔno na merennyegye ne so.
6Mʼani bɛkɔ anokwafoɔ a wɔwɔ asase no soɔ no so
deɛ ne nanteɛ ho nni asɛm no,
7Deɛ ɔyɛ ɔdaadaafoɔ biara
rentena me fie;
deɛ ɔtwa nkontompo no
mɛsɛe amumuyɛfoɔ a wɔwɔ asase yi so nyinaa;
na mapam ɔdebɔneyɛfoɔ biara
afiri Awurade kuropɔn mu.
ASCB : Nnwom 101